Botnets वा Ransomware। तपाईको कम्प्युटरको लागि अझ ठूलो ईभल के हो? - Semalt मात्र सोध्नुहोस्
आजकल, ransomware एक ठूलो इन्टरनेट सुरक्षा खतरों को एक रहन्छ। हालसालै, WannaCryptor आक्रमणले 350 350०,००० कम्प्युटरलाई असर गर्‍यो र विभिन्न इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू र सुरक्षा एजेन्टहरूबाट लाखौं विचारहरू आकर्षण गर्‍यो। यो लगभग हामीले आज सामना गरिरहेका सबैभन्दा ठूलो खतरा जस्तो देखिन्थ्यो। यद्यपि, आजका इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू बढी खतरनाक उपाध्यक्षले सामना गरिरहेका छन्, र यी बोटनेटहरू हुन्!
जबकि ransomware आक्रमण वास्तवमै दर्दनाक छन्, ती कम्तिमा देखिने छन्। Botnets लुकेका तरिकामा आफ्नो विनाशकारी प्रभाव छोड्नुहोस्। यो मालवेयरले नेटवर्कमा लाखौं कम्प्युटरहरू र अन्य यन्त्रहरूमा पूर्ण नियन्त्रण लिन सक्दछ।
फ्रेंक Abagnale, Semalt ग्राहक सफलता को प्रबंधक, एफबीआई अनुमान छ कि लगभग 500 मिलियन कंप्यूटरहरु प्रत्येक वर्ष संक्रमित भइरहेको छ। एक संक्रमित मेसिन अन्य सुरक्षा खतराहरूको सम्पूर्ण दायरामा पर्दछ। उदाहरण को लागी, यो ransomware द्वारा ईन्क्रिप्ट गर्न सकिन्छ र अर्को प्रकारको मालवेयर वितरण को लागी एक उपयुक्त उपकरण बन्न सक्छ। साइबर अपराधियोंले सजिलैसँग बोटनेटलाई स्पाम वितरण गर्न निर्देशन दिन सक्छ, र सफलता दर लगभग १००% हुनेछ। यी सबै हुन्छन् जबकि कम्प्युटरहरूका मालिकहरू के भइरहेको छ भनेर जान्दैनन्। केही विज्ञहरूले तर्क दिएका छन् कि बोटनेटमा इन्टरनेट पक्षाघात हुने सम्भावना हुन्छ।
किन botnets ले तपाईंलाई ransomware भन्दा बढि चिन्ता गर्नुपर्छ
त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् जुन बोटनेट्सले रानसमवेयर भन्दा ठूलो खतरा निम्त्याउँछ। साथै, अदृश्य हुनाले, बोटनेटको प्रभाव व्यापक छ। तिनीहरू संक्रमित कम्प्युटरको प्रयोग अन्य स्प्याम र अन्य कम्प्युटरहरूमा अन्य ransomware पठाउन वा सेवा (DOS) आक्रमण अस्वीकार प्रदर्शन गर्न सक्दछन्। तिनीहरू पनि नेटवर्क धोखा गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। सबैलाई यो खतराको बारेमा चिन्तित हुनुपर्दछ, ध्यानमा राख्नुपर्दछ कि traffic० - percent० प्रतिशत ईमेल यातायात सामान्यतया स्प्याम हुन्छ। मालिसियस एट्याचमेन्टको साथ सबै ईमेलहरू मध्ये percent 85 प्रतिशत रन्समवेयरसँग जोडिएका छन्।
संक्रमित कम्प्युटरको मालिकले सुरक्षा जोखिमका विभिन्न पक्षहरूको सामना गर्दछ। अपराधीहरूले तपाईंको ईमेल र सोशल मीडिया खाताहरूमा सबै जानकारी काट्न सक्छन्। केहिले यो जानकारी बेच्छन जबकि अरूले दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्दछ पीडितको बैंक खाताबाट चोरी गर्न।
बोटनेट पैसा बनाउने योजना परिवर्तन भएको छ
पहिले, बोटनेट अपरेटरहरू प्राय: पैसा कमाउन स्पाम वितरणमा निर्भर थिए। मरीना जस्ता ठूला botnets प्रति दिन billion ० अरब भन्दा बढी स्पाम पठाउन सक्छ। तर अधिकारीहरू र सुरक्षा अपरेटरहरूले चाँडै नै ठूलो बोटनेटहरू समात्नेछन् र अन्ततः उनीहरूलाई बहुमतबाट मेटाउनेछन्।
साइबर क्राइमको विश्वमा आविष्कारले थप लचिलो बोटनेट मोडेलहरू उत्पादन गरेको छ। तिनीहरू अब P2P (Peer-to-Peer), मोडेल प्रयोग गर्दैछन्। P2P मोडेलको आर्किटेक्चरका अनुसार, बट्सले सर्भरको रूपमा र ग्राहकको रूपमा दुबै प्रदर्शन गर्दछ। तिनीहरूले आदेशहरू पठाउन र प्राप्त गर्न सक्दछन्, र यसले असफलताबाट बच्न मद्दत गर्दछ।
कम्प्युटर बाहेक अन्य प्रकारका बोटहरू पनि बढि प्रयोग भइरहेको छ। यी सर्वर र उपकरणहरु को इन्टरनेट को चीजहरु को हो (IoT) कोटि।
अपराधीहरूले वेब सर्भरको अपेक्षाकृत ठूलो पावर र छिटो इन्टर्नेटको फाइदा लिदैछन् यातायात पुनःनिर्देशित गर्न र स्प्याम वितरण गर्न। IoT का उपकरणहरू सामान्यतया अपर्याप्त सुरक्षित हुन्छन्, र यसले उनीहरूलाई बोटनेटको शिकार सजिलो हुन्छ। DDOS आक्रमण सहित यी 'चीजहरू' को उपयोग गरेर कार्यको दायरा पूरा गर्न सकिन्छ। IoT को भयानक वृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै, IoT उपकरणहरूमा बोट गतिविधि बढेको गम्भीर खतरनाक छ। यो अनुमान गरिएको छ कि २०२० सम्म आईओटी कोटीका उपकरणहरूको संख्या २०..8 मिलियन हुनेछ।
त्यहाँ यस्तो सम्भावना छ कि अधिक कम्प्युटर, सर्भरहरू, र 'चीजहरू' बोटनेटले दास बनाइनेछ यदि उपभोक्ताहरू र संगठनहरू उपयुक्त रक्षा उपकरण र संयन्त्रमा अपडेट हुँदैनन्। बोटनेटको शिकार हुनबाट जोगिन, सुरक्षा प्रशिक्षण मुख्य हो। जब व्यक्तिहरू खतराका बारे सचेत हुन्छन्, अन्तिम पोइन्ट र नेटवर्क सुरक्षा उपकरणहरू र समाधानहरूको कार्यान्वयनले बढी सफलता प्राप्त गर्दछ। इन्टरनेट सुरक्षा समाधान विक्रेताहरु अब botnet सुरक्षा प्रदान गर्दै छ कि bot अपरेटरहरु को संदिग्ध संचार पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ।